Incwadi Evulekile eya kuSolwazi Kevin Folta ngezicelo ze-FOIA - Ilungelo Lase-US Lokwazi
Incwadi Evulekile eya kuSolwazi Kevin Folta ngezicelo ze-FOIA
Posted on February 12, 2015 by UGary Ruskin
UProfesa othandekayo uFolta:
Izolo bekunabanye Ukusabalala izindaba futhi ukuhlaziya maqondana nokusetshenziswa kwethu koMthetho Wenkululeko Yemininingwane Yezwe ukuthola izincwadi zosolwazi ababhalele iwebhusayithi ye-PR yezimboni zezolimo, i-GMO Answers. Siyajabula ukuba nengxoxo esidlangalaleni ngalesi sihloko nosolwazi abathintekayo. Sikholelwa ukuthi ukungafihli lutho kanye nezingxoxo ezivulekile ziyizindinganiso ezibalulekile okufanele sisebenze ngazo emphakathini wentando yeningi kanye nemakethe ekhululekile ngempela. Ukuze ngifeze lokho, ngicabange ukuthi kuzoba wusizo ukuchaza ukuthi kungani thina FOIA.
Kusukela ngo-2012, izimboni zokudla nezolimo zisetshenzisile okungenani ama- $ 103 wezigidi zamaRandi emkhankasweni omkhulu we-PR nowezombusazwe wokukhohlisa umphakathi ngokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo. Njengenkampani yezobudlelwano bomphakathi neKetchum baziqhayisa kuvidiyo yakamuva, "Ukusakazwa kwabezindaba okuhle kuphindeke kabili" kuma-GMOs kulandela lo mkhankaso we-PR, futhi kubeke imboni yezolimo phambili futhi yaba maphakathi nenkulumompikiswano ngama-GMO. Inhloso yalo mkhankaso we-PR ukuxosha imizamo esemqoka yokuwina amalebuli e-GMO asevele ekhona kuyadingeka emazweni angama-64, nokunweba ukusakazwa kwenzuzo kusuka kuma-GMO, kanye nezibulala-zinambuzane ezihamba nazo, isikhathi eside ngangokunokwenzeka - hhayi ukukhuthaza inkhulumomphendvulwano yomphakathi eyiqiniso ngama-GMO.
Lo mkhankaso wokulwa nabathengi ungcole ngezindlela ezingaphezu kweyodwa. Bekugcwele ukukhohlisa okuningi nemizamo ebhalwe kahle yokwenza bakhohlise abavoti. Ngokuphathelene naleyo mizamo, i-Washington State Attorney General imangalela iGrocery Manufacturers Association Okwe isibonelo esikhulu sokukhwabanisa kwemali yomkhankaso emlandweni wombuso.
E-US Right to Know, sikholwa ukuthi izimboni zokudla nezolimo kufanele zinokuningi okukufihlayo, ngoba zichitha imali eningi kakhulu zizama ukukufihla. Sizama ukuveza lokho abakufihlayo.
Njengengxenye yomzamo wethu, senze izicelo zombuso ze-FOIA zokuthola izincwadi zosolwazi ababhalele iwebhusayithi ye-PR yezimboni zezolimo, i-GMO Answers.
Laba profesa bangabasebenzi bakahulumeni. Bayakhokhelwa abakhokhi bentela ukuze basebenzele umphakathi; ukubambisana kwabo emanyuvesi kubanikeza isikhundla sokuba ngochwepheshe “abazimele”, futhi bavame ukucashunwa kwabezindaba njengongoti abazimele. Kepha uma labo profesa besebenzisana eduze nezinkampani zezolimo kanye namafemu abo angama-PR abumba ukuxoxisana komphakathi ngezindlela ezakha inzuzo yangasese yezinkampani, noma lapho besebenza njengobuso bomphakathi bemboni PR, sinelungelo lokwazi abakwenzile nokuthi bakwenze kanjani.
Ngokusebenzisa izicelo ze-FOIA, sizama ukuqonda umsebenzi osolwazi abawenzele uKetchum, (kanye nezinkampani zezolimo ezifana neMonsanto, Syngenta, Bayer, BASF, DuPont neDow; amaqembu ezentengiselwano afana neGrocery Manufacturers Association, iBiotechnology Industry Organisation kanye ne-Council for Biotechnology Information; amanye amafemu e-PR afana noFleishman Hillard no-Ogilvy & Mather, kanye ne-Winner & Mandabach) kwezepolitiki kuwebhusayithi ye-GMO Answers eyadalwa njengethuluzi le-PR lezinkampani zezolimo.
Kunezizathu zokukhathazeka ngezimpendulo ze-GMO. Iwebhusayithi yenziwe futhi iqhutshwa yinkampani yezobudlelwano bomphakathi iKetchum, nayo imele iRussia kanye nalo Umongameli, UVladimir Putin. I-Ketchum ixhunyaniswe ne Umzamo wobunhloli owenziwa eminyakeni eyedlule ngokumelene nezinhlangano ezingenzi nzuzo ezithinta ama-GMO, kufaka phakathi Isikhungo Sokuphepha Kokudla Nabangane Bomhlaba. UKetchum naye okuhlosiwe Greenpeace nge i-espionage.
Osolwazi imibhalo yabo esiyicelile basebenzisa udumo lwamanyuvesi ethu omphakathi ukushisa isithombe somkhakha onawo kufihlwe kaningi kubathengi nakubasebenzi iqiniso ngobungozi bemikhiqizo nokusebenza kwabo. Izincwadi zonke zilotshiwe ukubhala zabo ukuziphatha okusolisayo. Ubudlelwano bomphakathi obenzelwe izinkampani ezizimele akuwona umsebenzi wokufunda. Akusebenzi ukuzuzisa umphakathi. Ukusetshenziswa kwezimali zomphakathi ngenzuzo yangasese.
I-Federal and state Freedom of Information Act ikhona, ngokwengxenye, ukuthola ukuthi kungenzeka kusetshenziswe kabi izimali zikahulumeni ngezinjongo ezizimele.
Siphinde sibe nentshisekelo yokwehluleka kobuqotho besayensi. Ukuze sisebenzise isibonelo esisodwa esisobala, omunye wosolwazi amarekhodi abo esiwacelile ukuthi abukelwe kahle umkhakha ukhuluma amaphuzu ku-op-ed wabhala ngokumelene nelebula ye-GMO ye- IWoodland Daily-Democrat. Ngabe lowo profesa wabhala ngokwakhe i-op-ed? Noma ngabe yabhalwa yinkampani ye-PR eqashwe imboni yezolimo?
Ukuphinda amaphuzu okukhuluma embonini akubona ubuqotho kwisayensi; empeleni, kuphambene.
Sikholelwa ukuthi ukwenza izinto obala nokuvuleleka kuyizindlela ezinhle zokungabikho kobuqotho kusayensi.
Siyajabula ukuhlala eMelika, lapho amathuluzi e-FOIA avulekele zonke izakhamizi. Futhi ngakho-ke umsebenzi wethu uqondiswa ngu imigomo kaJames Madison: “Uhulumeni odumile, ongenalo ulwazi oludumile, noma izindlela zokuwuthola, umane uyisandulela seFarce noma seNhlekelele; noma, mhlawumbe zombili. Ulwazi luyohlala lilawula ukungazi: Futhi abantu abaqonde ukuba ngababusi babo, kumele bazihlomise ngamandla olwazi olunikezwa wona. ”
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu BASF, Bayer, Bio, Inhlangano Yezimboni Ye-Biotechnology, I-CBI, Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology, Dow, Dupont, Umbaleki obalekayo uHillard, I-GMA, Izimpendulo ze-GMO, Inhlangano Yabenzi Begilosa, UKetchum, UKevin Folta, Monsanto, Ogilvy & Mather, Syngenta, Owinile & Mandabach